Maamulka Puntland: Waxbarashada oo loo qoondeeyey 7% Miisaaniyadda Guud – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Puntland: Waxbarashada oo loo qoondeeyey 7% Miisaaniyadda Guud
Garowe – Mareeg.com: Maamulka Puntland ayaa yara kor u qaaday qoonadada waxbarashadu ku laheyd miisaaniyadda ee sanadalaha ee maamulka, iyadoo la gaarsiiyey 7%, waxeyna horay u aheyd 3%.
Shir ay manta yeesheen Golaha wasiirrada maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in qondadaas la isku raacay, islamarkaana madaxweynaha maamulka C/weli Cali Gaas uu dhankiisa arrinkaas go’aamiyey.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar ayaa gudoominayey kulanka golaha wasiirada oo maanta lagu gorfeeyey kordhinta miisaaniyada waxbarashada iyo xeerka xamuulka gaadiidka wadooyinka Puntland.
War-murtiyeed arrintaan looga hadlay oo shirka golaha wasiiradda maamulka Puntland maanta kazoo baxay ayaa u qornaa sidan: –
Kulanka golaha xukuumadda Puntland ee maanta oo taariikhdu tahay 11, March 2014.
UJEEDO: qodobadii ka soo baxay kulankii 4-aad ee golaha wasiiradda.
1- Iyadoo laga jawaabayo soo jeedintii wasiirka waxbarashada, madaxweynuhu wuxuu go’aamiyey in miisaaniyada waxbarashada sanadka 2014 la gaadhsiiyo boqolkiiba todobo(7%). Halka markii hore ay ahayd (3%).
Sidoo kalena sanad kasta (1%) in la kordhiyo miisaaniyada, iyadoo lagu darayo 200 oo macalin sanad walba.
2- Golaha xukuumaddu waxay ansixiyeen xeerkii xamuulka gaadiidka wadooyinka Puntland.
3- In la qaban qaabiyo dood cilmiyeedyo diiniya iyo wacyi-gelin culuumada diintu sameeyaan, si looga hortago xagjirnimada iyo afkaaraha ururka Al-shabaab, saxaafadana la mariyo.
Kulanka wasiirada waxaa sidoo kale lagu dhaariyey wasiiro uu dhowaan magcaabay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, kuwaas oo kala ah: –
Wasiirka Warfaafinta Puntland, Cabdiweli Xirsi Cabdulle Indha-Guran
Wasiiru Doowlaha Madaxtooyada, Dr. Max’ed Cabbaas Cumar
Wasiiru Dowlaha Kalluumaysiga, Cabdi-raxman Jaamac Kulmiye
Xafiiska warfaafinta, wacyi-galinta Iyo hidaha Iyo dhaqanka ee